Boston Latin Academy | Boston School Finder
BPS/Degmada (dugsiga imtixaanka)7aad - 12aad
205 Townsend Street, Roxbury
BPS waxay cabirtaa tayada dugsiga ayadoo adeegsanaysa hanaanka heerarka kala sareeya oo lagu cabiro dhammaan dugsiga degmada. Heer 1 ayaa ah buundada ugu saraysa dhanka tayada (cagaar); Heerka 4 (Casaan) ayaa ah heerka ugu hooseeya dhanka tayada.
Heer Gobolka: Dugsiyada Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Heerarka dugsiga ayaa qabanaaya kaliya dugsiyada degmada iyo kuwa charter ka ah Massachusetts Department of Elementary iyo Secondary Education (DESE).
Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.
Dib u furida COVID-19
Taariikhda Billoowga* Sibteembar 21, 2020
Naqshada Dib u furida Iskudhaf, oo leh waxbarashada oonleenka ah
Wixii Faahfaahin dheeraad ah Halkaa guji
Xaqiiqooyin Degdeg ah
Waxbarashada jinsi ahaan Iskujirka ah
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:20am-1:40pm
Lambarka Taleefanka 617-635-9957
Ciwaanka Iimeyka Laxariir Dugs
Webseetka Booqo Webseetka
Kormeerka Oonleenka ah N/A
Wax kabadel Ciwaanka
Majiraan Macluumaad Socda Majiraan Macluumaad Socda
Majiraan Macluumaadka Kaxaynta Majiraan Macluumaadka Kaxaynta
Majiraan macluumaadka Kalawareega Majiraan macluumaadka Kalawareega
Si aad u aragto xiliyada kalawareega ee laheli karo hoos gali goobtaada.
Adeegso goobtaada hadda
Fadlan ogsoonoow, ardayda ayaa xaq uyeelan kara gadiid lagusoo qaado laakin waxay kuxirantahay fasalkay dhigtaan iyo inta gurigoodu ay kunool yihiin ujiro dugsiga. Fadlan kafiiri qaybta FAQ ee kusaabsan gaadiidka si aad macluumaad dheeri ah uhesho.
Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuran yihiin arday kasta oo kunool Boston. Aqbalaada ardayda waxaa lagu go'aanshaa diiwaangalin furan, bakhtiya nasiib, codsi, ama imtaxaan. Diiwaangalinta waxaa lagu baxshaa imtaxaan.
Kabaro Macluumaad dheeri ah
Macluumaadka Kooban ee Dugsiga
Boston Latin School wuxuu leeyahay boqol iyo shan iyo sodon sanno oo taariiqda machadka heerka sare oo ay la jiraan qiimaha meeleynta kulliyada heerka sare. Waxaan xoojina habdhiska ardayga matalayo dhaqanka qaniga ah ee kala duwan ee Boston, bulshada qowmiyada kala duwan iyo maamulada loogu talogalay iyo macalinka la tartamo oo ku dhiirogeliyo ardayda. Manhajka waxaa loo hormariyay inay hubiso in ardayda oo dhan si wanaagsan ugu diyaarsanyihiin guusha kulliyada iyo nolosha. Waxaan raadina inaan kula tartano ardaydeena manhajka adag iyada oo la siinayo isku dhafka lagu guuleysanayo.
Dugsiga imtaxaanka udiyaargaroowga kuleejka.
Heerarka sare ee xooga waxbarashada ee jawiga lagu kobcinayo.
National Blue Ribbon School of Excellence.
Waxaan Lagu Magacaabay Dugsi sare oo heer sare oo Amerikaan ah waxaana u aqoonsatay dawlada Maraykanka.
Taariikh heer sare ah oo dhanka meelaynta kuleejka ah.
Sharafaynada iyo koorsooyinka Meeleynta Hormarsan ee dhammaan maadooyinka.
Macalimiinta ka go'an ee la tartamaa oo dhiirogeliyo ardayda.
Banramaijka casharada gaarka ah ee tusaalaha ilmaha sku da'da ah.
Iskaashi ayaan laleenahay IBM.
Barnaamijyada muusiga, farshaxanka iyo fanka masraxa.
Beerta bananaka fasalka.
Kooxaha iy naadiyada ciyaaraha tartanka loogalo.
Gole arday oo qoomiyado kaladuwan kasoo jeeda.
Ururada firfircoon ee waalidka.
Uruurada Taageerida arday qalin jabinaysa.
ESL ta Manhajka Guud.
Iskudhafka Baahida Heerka Sare (Naafada Dareenka-Niyad dhiska)
Xogta dadaalka ardayga oo lagusoo bandhigay hoos ayaa kasoo baxay natiijooyinka Imtaxaanka Jiilka xigga. Si aad uhesho macluumaad dheeraad ah oo kusaabsan dugsiyada, fadlan booqo webseetka Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare . Wixii kusaabsan dugsiyada leh xarumaha kaladuwan, macluumaadka hoos kuqoran waxay u taagan tahay dhammaan dugsiyada kujira ururkaan, mana ahan kaliya xogta dugsiga kaliya. Haddii aadan arkin xogta, lagama heli karo dugsigaas.
OGAYSIISKA MUHIIMKA AH: DESE masoo saarin go'aanada isla xisaabtanka dugsiga, degmada, ama gobalka ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 sabab la xariirta joojinta imtaxaanada gobalka iyo xiritaanka dugsiga kadib markuu dilaacay COVID-19. Sidaas awgeed, ma jirto xogta dadaalka ardayga oo la heli karo oo kasoo baxday gobalka sanad dugsiyeedka 2019-2020.
Cabirka Qalin jabinta
Baahiyaha Badan qaba
hindida Mareykan ama Udhashay Alaska.
Udhashay Hawai ama Pacific. Islander
Qoomiyadaha iskudarka ah, aan Hispanic ga ahayn
Dadaalka aqooneed ee Ardayga
Heerka Haynta Macalimiinta
85 oo kamid ah91
3763 oo kamid ah4319
67221 oo kamid ah76629
Heerka Xaadiritaanka Ardayda ee Kuleejada
Oo wadarta guud oo Ladiiwaangashay ah
window.charts.studentDiversity.data = [21.40, 18.80, 26.40, 3.50, 0.10, 0.10, 29.70]
window.charts.teacherDiversity.data = [20.10, 17.20, 13.10, 2.00, , , 62.50]
Barnaamijyada kabaxsan Manhajka
43+ kooxood ayaa udiyaarsan ardayda. Tusaalaha waxaa ku jiro Jilaayayaasha Waxbarashada Academy (ruwaayada), Kooxda muuqaalada kartoonka, Kooxda Carabta, Kooxda Farshaxanka, Certamen (Kooxda Laatiinka), Kooxda Heesaha, Kooxda Muusikada, Big Sister, Mutadawiciinta Qabiilka Dragon, Danjirayaasha Ardayda
Kubada Koleyga Wiilasha, Soosarka Gabdhaha
Ururka Sharafta Qaranka
Facebook Twitter Koobi Garayso Lifaaqa
Dookha aad ugu jeceshahay
Marka Loofiirsho Dookhyadayda
Dib Qaadashada Hogaanka